Fitantanam-pitondrana · Janoary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Janoary, 2013
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Janoary, 2013
Madagasikara: mpiasa 200-n'ny QMM no tsy afa-nandao orinasa nohon'ny mpikomy
Tselatra · Fanoherana14 Janoary 2013
Hisongona An'i Etazonia i Shina Amin'ny 2049?
Azia Atsinanana12 Janoary 2013
ny tatitra iray navoakan'ny Akademia Shinoa Momba ny Siansa tamin'ny 8 Janoary 2013 dia miteny fa tahaka ny hisongona an'i Etazonia amin'ny sehatra rehetra i Shina amin'ny 2049, ary ho avy ny fiverenan'ny firenena Shinoa amin'ny fahatanorany. Niteraka eso mahatsikaiky tao amin'ny Sina Weibo ilay fanambaràna, nahitàna ireo mpisera ety...
Japana10 Janoary 2013
Miala tsirairay eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ireo toerana mahaleotena fijerena horonantsary ao Japana. Nanova ny endrik'ireo araben'i Tokyo ny onjan'ny fanakatonana ireo toerana fijerena horonantsary. Very toerana ireo olona izay zatra miaraka sy mandany fotoana tany amin'ireo teatra ntaolo ireo.
Espaina: Taona Vaovao, Fanamby Vaovao, Rafitra Vaovao
Eoropa Andrefana07 Janoary 2013
[Amin'ny teny Espaniola avokoa ny rohy amin'ity lahatsoratra ity.] « Tratry ny taona 2013 ! Taona hanavaozantsika ny rafitra». Tamin'ny alin'ny faran'ny taona, izany no sioka voalohany nalefan'i Partido X, Partido del Futuro [« Parti X, Antoko Vaovao»], antoko politika vaovao izay niditra tamin'ny aterineto espaniola tamin'ny fomba manaitra sy...